Duufaanta Ophelia oo ku dhufatay Ireland maanta jabisay rikoorro | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta Ophelia hadda
Duufaanta Ophelia ayaa maanta soo gaadhay Ireland. Waddanku wuxuu ku jiraa heegan cas, halkaas oo dabeylaha xoogga leh ee duufaanka horayba looga dareemay. Ahmiyada ugu weyn ee la filayo inay soo degto saacadaha soo socda, waxay mari doontaa dhamaan xeebta galbeed. Dabaylaha dabaysha ayaa gaari doona England, waxaana la filayaa in laga bilaabo caawa ay bilaaban doonto inay sii xumaato, ka dib markii ay ka gudubto dalka oo dhan koofur ilaa waqooyi. Ireland waxay lahaan doontaa duufaankeedii ugu xumaa tan iyo 1961.
Su’aasha ugu weyn ee qof walba maskaxdiisa ku jirta ayaa ah sidee duufaan baaxad weyn leh ay ku gaari kartaa Yurub. Xaqiiqdii, Ophelia kaliya samee rikoorka sidii duufaantii ugu horreysay ee ugu weyneyd ee sameysata oo wax ku duubata lagana dhigo halbeeg bariga fog. Dhacdadan horay looma diiwaan gelin.
Ophelia ma duufaankii ugu horreeyay ee ku dhaca Yurub?
Saadaasha 6-7 saacadood
Ophelia ma ahayn duufaanta kaliya ee ku dhufatay Yurub. Su'aasha ah "Maxay Yurub uga jirin duufaanno?" Gabi ahaan sax ma ahan. Waa wax aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn, shaki kuma jiro, gaar ahaan sababtoo ah heerkulka biyaha ee badaha ee saadaaliya cadaawadda duufaanadan waaweyn. Laakiin haddii sii kululaynta adduunku sii socoto, Khubaro aad iyo aad u tiro badan ayaa isku raacay in saamayntu tahay mid aan la saadaalin karin, iyo in xitaa duufaanadu aakhirka imaan karaan.
Dib markaan u jaleecno, waxaan helnaa Hurricane Faith oo qaab daciif ah ku timid Norwey sanadkii 1966. Qaaradda Ameerika. Waxay ku sameeyeen si hoose, qaybta 2006. 1tii waxaan haysannaa Vince oo soo galay Jasiiradda Iberia, oo ku tababartay xeebta Marooko. Laakiin iyagu kaligood bay ahaayeen imminka.
Ophelia waxay sidaas noqotaa duufaantii ugu horeysay ee ugu weyneyd ee gaarto Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Duufaanta Ophelia ayaa ku dhufatay Ireland maanta jabinta rikoorrada